Mpanolotsaina fitaovam-pitsaboana any Changshan'S Mpanolotsaina 1.1 kilasy vaovao Albenatide manomboka ny fizahana fizahana ara-pitsaboana |
Mpanolotsaina Fotom-panafody any Changshan 1.1 Fizarana vaikaola Albenatide Manomboka Ny Fitsapana ara-pitsaboana
Amin'izao fotoana izao, ny orinasa dia nahavita ny asa mifandraika amin'ny fikarohana klinika Phase II sy ny fanomanana ny fitsapana klinika Phase III amin'ny tsindrona Albenatide. Araka ny valin'ny fitsapana momba ny fitsaboana klinika mialoha sy ny fahazoan-dàlana amin'ny fitsapana ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny tsindrona Albenatide, miaraka amin'ny tena toeran'ny orinasa, dia mino ny orinasa fa efa manana ny fepetra hanombohana ny fizaram-pitsaboana klinika III ary manapa-kevitra ny hanomboka ny fitsapana klinika III .
Albenatide dia zava-mahadomelina kilasy 1.1 ho an'ny fitsaboana ny diabeta karazana II. Izy io dia fikarakarana agonist an'ny GLP-1 receptor lava be dia be azo tsindrona indray mandeha isan-kerinandro, izay tena manatsara ny fanarahana ny marary ny fanafody.
Ny orinasa dia nanatanteraka ny fizahana fizarana fizahana ny tsindrona Albenatide tany amin'ny hopitaly voalohany tao amin'ny Jilin University, ary ny fitsapana momba ny fitsaboana amin'ny alàlan'ny tsindrona Albenatide andiany II any amin'ny hopitaly 28 anisan'izany ny hopitaly Peking University People. Taorian'ny fizarana fizahana fizahana Fomba II an'ny Albenatide Injection dia vita ny 7 Jona 2019, ny orinasa dia nanao famakafakana statistika sy fanangonana antontan'isa fikarohana mifandraika amin'izany. Mandraka ankehitriny, ny orinasa dia namita ny fikarohana klinika andiany II mifandraika amin'ny tsindrona Albenatide. Ny valin'ny fitsapana klinika andiany faha-II misy ny tsindrona Albenatide dia nanaporofo fa tratra ny teboka farany amin'ny fitsapana klinika II.